Liverpool Oo Ugu Dambayn War Wanaagsan Ka Heshay Dhibka - Axadle | Wararka Africa
Liverpool Oo Ugu Dambayn War Wanaagsan Ka Heshay Dhibka
Kooxda Liverpool oo wararkii ugu dambeeyay ee ay xiddigaha kooxdeeda ka maqlaysay ay ahaayeen kuwo dhiilo ah ayaa markan ugu dambayn war wanaagsan ka heshay kahor kulanka adag ee ay toddobaadkan qaabilayaan kooxda Leicester City.
Kulamada fasaxa caalamiga ah ee qaramada ayaa kaliya sii xumeeyay dhibaatada dhaawacyada haysatay Liverpool, Liverpool oo ay u bilaabmayaan kulamo badan oo muhiim ahi ayay markale ka dhaawacmeen xiddigo muhiim ahi.
Xiddigihii lamaanaha daafaca dhexe ugu soo ahaa inta badan ee Virgil Van Dijk iyo Joe Gomez ayaa loo diray dhaawacyo mudo dheer ah, sidoo kale Trent Alexander Arnold ayay u badantahay inuu mudo kooban maqnaan doono.
Da’yarka daafaca dhexe ee Rhys Williams ayaa laga soo fasaxay xiddigaha da’yarta ah ee xulka England kaddib jug gaadhay balse warka wanaagsan ayaa ah mid xalay uga yimid Liverpool kabtanka Scotland ee Andy Robertson.
Daafaca bidix ayaa ku dhibtoonayay dhaawac muruqa ah isaga oo ku sugan xulkiisa Scotland waxaana jirtay suurogalnimo uu Klopp ku waayi karo ciyaarta Leicester dhammaan afartiisa daafac dambeed ee asaasiga ah.
Haddaba, Robertson aya xalay xulkiisa Scotland u ciyaaray dhammaan 90-kii daqiiqo ee kulankii Israel ay guuldarrada kala kulmeen.
Liverpool ayaa sidoo kale kalsooni weyn ku qabta in kabtankeeda Jordan Henderson uu taam buuxa u noqon doono ciyaarta Foxes kaddib markii uu dhaawac dhabarka ah ka cawday kulankii ay Belgium guuldarrada kala soo laabteen.
Ugu dambayn, xiddigaha khadka dhexe ee Thiago Alcantara iyo Fabinho ayaa tartan kula jira wakhtiga iyagoo isha ku haya inay diyaar u noqdaan ciyaartaas.
Kaalaya Qaata!! – Real Madrid Oo Mid Kamida Xiddigaha
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo qarax lagula eegtay degmada